दसैँको नयाँ आशीर्वाद : युवराज खतिवडा भएस् ! - हिपमत
दसैँको नयाँ आशीर्वाद : युवराज खतिवडा भएस् !
खतिवडा राजदूतका लागि सिफारिस भएपछि व्यङ्ग्यले रङ्गियो सामाजिक सञ्जाल
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । योसँगै सातौँ राजनीतिक नियुक्ति पाएका खतिवडाको आलोचना र व्यङ्ग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रंगिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र खतिवडाले सत्ताको चाकरी कै भरमा एकपछि अर्को नियुक्ति पाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकृतको रुपमा २०३९ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका खतिवडा राष्ट्र बैङ्कबाट २०५७ सालमा बाहिरिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको हैसियतले पाएका नियुक्तिबाहेक पनि उनले पटकपटक नियुक्ति पाएका छन् । पछिल्लो पटक अमेरिकी राजदूतका रुपमा सिफारिस उनको यो सातौं राजनीतिक नियुक्ति हो ।
राष्ट्र बैङ्क छाडेको एक वर्षपछि २०५८ सालमा खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला देशमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल थियो । २०६१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बाहिरिएपछि केही समय उनले युएनडीपीमा अर्थविद्को रुपमा काम गरे । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नियुक्ति पाएका थिए । त्यहाँ उनले ९ महिना बिताए ।
२०६६ चैत ९ गते राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर रुपमा उनले तेस्रो पटक राजनीतिक नियुक्ति पाए । गभर्नरका रुपमा उनले ५ वर्ष बिताए । खतिवडालाई २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुनः नियुक्त ग-यो । यो उनको चौथो राजनीतिक नियुक्ति थियो । त्यसपछि ओलीसँग निकट भएर काम गरेका गर्दै उनले २०७४ सालको आम चुनावमा वाम गठबन्धन विजयी भएपछि फेरि ओलीकै आशिर्वादमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
गत फागुनमा अर्थमन्त्रीको रुपमा पुनः नियुक्ति, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति र अहिले अमेरिकाको राजदूतको रुपमा सिफारिस भएका उनी राजनीतिक नियुक्तिको सातौं खुड्किलोमा पुगेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा डा. खतिवडाको सिफारिसलाई कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति नपाएको विषयसँग जोडिएको छ भने अब अमेरिकाको राजदूत भएर फर्किएपछि उनलाई नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तान र पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल भट्ट नियुक्त गर्न माग गर्दै व्यङ्ग्यसमेत गरिएको छ ।
कुलमान बिदा हुने र युवराज पुरस्कृत हुने कस्तो विडम्बना !
कमरेड तिम्रो गणतन्त्र बागमतीको ढल भन्दा नी बढी गन्हायो,आज जनता नाक थुनेर हिँड्दै छन्।
— kamal paudyal (@kamal69227559) October 1, 2020
गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा सदस्य, अर्थमन्त्री, आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अब राजदूत । कतिबिघ्न भर्सटायल मान्छे । युवराज खतिवडाले अब राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा र फुटबल टोलिमा स्थान पाउन मात्र बाँकी भो !
— HunTer 🇳🇵 (@ManozJunG) October 1, 2020
युवराज हैन, महाराज भनौ ।
१५ दिनमा २ पद नियुक्ति पाउने तागतवर कोहि छ ?
— 𝐒𝐮𝐬𝐡𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐫𝐤𝐢 (@sushilkarki97) October 1, 2020